ताराखोलामा यसरी मनाईयो यस वर्षको माघी पर्व ! | ebaglung.com
ताराखोलामा यसरी मनाईयो यस वर्षको माघी पर्व !
२०७५ माघ ३, बिहीबार २१:००	Top News, अन्य समाचार
खगेन्द्र विश्वकर्मा, ताराखोला २०७५ माघ ३ । ताराखोला गाउपालिका ३ हिल पधेराखोला माघी पर्व मेलाले आफ्नो १३ औ बार्षिक उत्सवको समापन कार्यक्रममा वडान ३ का अध्यक्ष दिलबहादुर बस्नेतले गाउको विकासको लागी आफु निरन्तर लागि रहने बताए । उनले यस्ता पर्वहरुलाई अनुसाशित तरिकाले मनाउनु पर्नेमा ध्यानदिनु पर्ने बताए ।
यस कार्यक्रमा कलाकार खगेन्द्र विश्वकर्माको, तनमति घर्तीको सांगीतिक प्रस्तुति रहेको थियो । विभिन्न खेलकुदमध्य ४ टिम सहभागी भएका थिए। नव सिर्जना युवा क्लब प्रथम , माघी पर्व आयोजक समिति व्दितिय भएका हुन ।
एकल नृत्यमा ६ जना सहभागी मध्ये देवी रोका प्रथम र यामु रोका व्दितिय भएको क्लबले जानकारी दियो । क्लबले १३ औ बार्षिक उत्सवको विभिन्न खेलकुद तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा गरि पुस २७ देखि माघ १ सम्म संचालन गरेको थियो ।
कार्यक्रम क्लका अध्यक्ष प्रेम घर्तीको अध्यक्षता राजकुमार अठारेको स्वागत र झमबहादुर पुनको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
सवारी दुर्घटना न्युनीकरणका लागी सार्वजनिक सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु !
नेरा त्रिभुवन माविले उठायो, एकै दिनमा झण्डै ५ लाख महोत्सवका लागि विभिन्न उपसमिति गठन !